ज्वरो आएर रूममै बसेका पराजुलीको अचानक नि*धन – Online Nepal
ज्वरो आएर रूममै बसेका पराजुलीको अचानक नि*धन
April 29, 2020 366
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीको लागि ९ बर्ष अघि युएई आएका एक नेपालीको निधन भएको छ। ट्रान्सगार्ड सेक्युरिटी कम्पनी दुबईमा कार्यरत बेलबारी,३ मोरङ्का दिपक पराजुलीको ह्दयघातका कारण आईतावार बिहान उनकै कोठामा निधन भएको हो।
केहि दिन अघि सामान्य ज्वरो आएर रूममै औषधी लिईरहेका उनी एक्कासी कोठामा ढलेपछि नजिकैको एनएमसी रोयल अस्पताल लगिएको थियो। तर अस्पताल पुर्याए लगतै चिकित्कसले निधन भएको पुष्टि गरें।
उनको शव पोस्टमाटमको लागि एनएमसी रोयल अस्पतालमा राखिएको छ।कोरोना रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। नाै बर्ष पहिले बैदशिक रोजगारिका लागि युएई आएका पराजुलीका एक श्रीमती,२ छोरा,आमा रहेका छन्। २ छोरा पनि बैदेशिक रोजगारमा रहेका बँताईएको छ।
पराजुलीको निधन हुँदाकै दिन उनको जन्मदिन परेको थियो सामाजिक संजालमा जन्मदिनको शुभकामना आउंदै गर्दा उनि भने यो संसारबाट सधैका लागि बिदा भैरहेका थिए । उनले आफ्नै जन्मदिनको दिन साथीभाई र आफन्तको पनि शुभकामना न त पढ्न पाए न त देख्न पाए ।
Prevशुष्मा कार्कीले कुकुरको भिडियो सार्वजनिक गर्दै यसो भनिन् (भिडियो हेर्नुस्)
Nextयति होचो मेघराजले बिहे गरे, यति अग्ली श्रीमती ! यस्तो छोरा जन्मिए । १५ दिनदेखि खान नपाएर ६ महिने छोराको बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस)
खुशीको खबर: बागलुङकी अंशु सापकोटाको पाँचौ रिर्पोट नेगेटीभ, अर्को रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आए डि’स्चार्ज
दशैंको लागी खसीको मासु किन्दै हुनुहुन्छ?सावधान रहनुहोस
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62083)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51058)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45375)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27850)